🥇 ▷ Kaaliyaha Google sidoo kale wuxuu leeyahay qaab mugdi ah ✅
Kaaliyaha Google sidoo kale wuxuu leeyahay qaab mugdi ah
Qaabka mugdiga ah ayaa ah kan ugu weyn ee toddobaadkan la ololeeya. Dhowr dalab oo Google ah ayaa horeyba u soo helay maalmahan, sida ay ahayd xaaladdii Gmail ama Google Play. Hadda waa marki loo baahdo codsi cusub oo Android ah si loo yeesho qaabka mugdiga ah, kaasoo kiiskan ah Kaaliyaha Google. Kaaliyaha caanka ah ayaa waliba sii daaya qaabkan.
Google ayaa cadeeyay inay doonayaan Codsiyadaada oo dhan waxay leeyihiin qaab mugdi ah. Iyagu waa ay fulinayaan hadda in sidoo kale Kaaliyaha Google Waxaad marin u leedahay habkan mugdiga ah, in kasta oo xilligan la joogo ay jiraan kuwa tiro yar oo gala habkaan kaaliyaha ah.
Si ka duwan qaabka madow ee Google Play, Tani uma muuqato inay gaar u tahay Android 10. Tan iyo markii isticmaaleyaasha wata taleefannada Pixel ama moodooyinka Samsung ay mar horeba heleen marinkan mugdiga ah ee Kaaliyaha Google. Marka waxay noqon laheyd casriyeyn guud oo loogu talagalay kaaliyaha dhammaan taleefannada Android.
Sidan, waxaan arki karnaa in daaqadda soosaarka ayaa soo dhalaalaysa midab madow, sida tii aan ku aragnay Gmail maalmahan. Ku habboon adeegsadayaasha taleefanka leh OLED ama AMOLED panel waxay awood u yeelan doonaan inay yareeyaan isticmaalka tamarta, sidoo kale door bidida aqrinta.
Faahfaahin dheeri ah lama bixin ku saabsan habkan mugdiga ah ee loo sii daayo kaaliyaha Google. Waxaa la rajeynayaa in loo geyn doono adduunka oo dhan, si ay adeegsadayaashu ugu raaxeystaan. Laakiin ilaa iyo hadda ma aysan jirin taariikha loogu talagalay. Marka waa in aan sugno illaa inta intaa la ogyahay.
Laakiin qorshayaasha shirkadda waa cad yihiin, sidaa darteed taasi La yaab malahan in Caawiyaha Google sidoo kale uu helo qaabkan Madoow Android. Waxay umuuqataa inaan sugnaa waxoogaa yar oo aan ku raaxeysanayno, waayo hadda waxaa laga bilaabay suuqyada sida Mareykanka. Waxaan isha ku heyn doonaa wararka cusub.